Ngalaba Na Njikọ ionic na Covalent
Njikọ Abụọ na Ionic na Covalent Bonds
Ihe atụ nke ogige nwere ụdị abụọ
Njikọ njikọ ionic bụ njikọ dịka n'etiti njikọ abụọ dị iche iche nke ọ bụla atom yiri ka ọ na-enye ya electron na atọ ọzọ. N'aka nke ọzọ, ọ na-agụnye ihe abụọ na-enyere ndị electrons aka ịbịaru nhazi eletrọn. Ụfọdụ ogige nwere ma ionic na covalent. Ogige ndị a nwere ion ion polyatomic . Ọtụtụ n'ime ogige ndị a nwere metal, ihe na-adịghị mma, nakwa mmiri.
Otú ọ dị, ihe atụ ndị ọzọ nwere ihe jikọrọ ya na ígwè site na njikọ ionic na ejikọtara ọnụ. Ndị a bụ ihe atụ nke ogige nke na - egosiputa ụdị njikọ abụọ dị na ya:
NaNO 3 - sodium nitrate
(NH 4 ) S - ammonium sulfide
Ba (CN) 2 - barium cyanide
CaCO 3 - calcium carbonate
KNO 2 - potassium nitrite
K 2 SO 4 - potassium sulfate
Na ammonium sulfide, a na-ejikọta ammonium cation na ion sulfide ọnụ, ọ bụ ezie na ụdị niile dị na ya adịghị mma. Esemokwu electronegativity dị n'etiti ammonium na ion sulfur na-enye ohere maka njikọ ionic. N'otu oge ahụ, a na-ejikọta ha na hydrogen na atom nitrogen.
Calcium carbonate bụ ihe atụ ọzọ nke onyinye nwere ma jikọtara ma dị na ion. N'ebe a, calcium na-arụ ọrụ dị ka cation, na ụdị carbonate dịka ụgbụ. Ụdị ndị a na-ejikọta njikọ ionic, ebe carbon na oxygen na carbonate dị n'otu.
Ụdị njikọ nke kemikal nke etiti n'agbata amụọ abụọ ma ọ bụ n'etiti ígwè na setịpụghị ihe na-adabere na ọdịiche electronegativity dị n'etiti ha.
Ọ dị mkpa icheta ụzọ nkekọ na nkewa dịtụ aka. Ọ gwụla ma ụmụ abụọ na-abanye na njikọ nkekọ yiri ihe electronegativity, njikọ ahụ ga-adịtụ ntakịrị. Nanị ihe dị iche n'etiti ihe jikọrọ covalent ọnụ na njikọ ionic bụ ogo nke nkwụsị ụgwọ.
Cheta akara ngosi electronegativity, ya mere ị ga-enwe ike ịkọ ụdị nke agbụ dị na ụlọ ọrụ:
nkwonkwo ejikọta na nonpolar - Nhọrọ nke electronegativity bụ ihe na-erughị 0.4.
Njikọ aka nke pola - Njikọ electronegativity dị n'agbata 0.4 na 1.7.
Njikọ na-adịgide adịgboroja - ọdịiche dị iche iche nke electronegativity n'etiti ụmụ anụmanụ na- ekekọrịta dịka karịa 1.7.
Ihe dị iche n'agbata ionic na covalent jikọtara ya na ọ bụ naanị otu ihe jikọrọ covalent njikọ na-ejikọta ihe abụọ dị na otu nnwere onwe (dịka, H 2 , O 3 ). O yikarịrị ka ọ ga-aka mma ka ị cheta njikọ nke kemịkal dịka ihe kariri ma ọ bụ karịa-pola, tinyere continuum. Mgbe nkwonkwo ionic na covalent na-eme na ngwongwo, akụkụ nke ionic dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nile n'etiti etiti na ngwakọta nke ụlọ ahụ. Njikọ ọnụ nwere ike ime na polyatomic ion ma ọ bụ cation ma ọ bụ njikọ.
Kedu ihe bụ Cosmological Constant?
Kedu Elu Eluigwe Dị n'igwe?
Iwu nke Henry
5 Ụzọ dị mma iji mụta maka usoro ihe gbasara mbara igwe
Nkọwapụta nke mmiri
Ot'u esi eme nnyocha banyere akwukwo ndu
Ịghọta oge Zulu na nhazi oge niile
Ee, Ụmụ nwoke na-adaba na ọnwa
Gịnị kpatara Muggy Weather?
Kedu ihe bụ ọdịiche dị n'etiti ọdịiche dị iche iche na nke dị ala?
Mpaghara Mpaghara Diamond
Eziokwu Banyere Carnivores
"Mkpụrụ Vaịn na Sun" Act III Ntinye Nchịkọta na Ọmụmụ Ihe
Iji nyocha Verb nke Spanish
Ihe odide sitere na okwu Malcolm X
Ihe nbili nke ukwu abuo
Ihe dị mkpa nke akụkọ ihe mere eme na nyocha na nkọwa
Ihe ndị a dị egwu bụ ihe mere anyị ji atụkwasị obi
Chemistry Science Fair Project echiche
'Mpụ na ntaramahụhụ' Review
Otu esi ekwu okwu nke French Adverb Plus
Egwuregwu Ngwuregwu Poker Home 101
Gịnị mere anwụ ji egbu mmadụ?
Nduzi nke ndi nmalite ighota onodu ugbo nke ikuku
Ilere saịtị Weebụ na Spanish na akpaghị aka
Enyi Patrick Patrick na onye nche ya Angel, Victor
Aro maka Iduzi akwukwo akwukwo
Otu esi enweta ma jiri Casino Ebe E Si Nweta
Na-eche - Ịdị Ume, Na-eche Ekele Maka
Agha Obodo Amerịka: Lieutenant General John C. Pemberton
Olee otú Òtù Na-ahụ Maka Ọkụ n'Obi si metụta onyeisi oche Barack Obama
Egwuregwu Arts Martial: Taekwondo vs. Karate
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Kasị Mma Mba
Ubasute yama - Mụta site na Akụkọ